Antanifotsy : nivadika ilay Mazda nitondra mpandevina, roa maty | NewsMada
Antanifotsy : nivadika ilay Mazda nitondra mpandevina, roa maty
Tra-doza tany Ambohidava Antanifotsy ny fiara Mazda iray nitondra mpandevina, omaly tokony ho tamin’ny 1 ora antoandro, teo amin’ny PK 100. Olona roa namoy ny ainy, raha 19 naratra mafy.
Nidina fidinana ny fiara ary tafala lalana tafalatsaka tany anaty tatatra. Nivadika tanteraka ilay Mazda vokatr’izany. Olona roa, lahy sy vavy namoy ny ainy teo noho eo, raha 19 naratra. Nalefa notsaboina eny amin’ny HJRA ny valo tamin’ireo.
Voalaza fa fiara roa Sprinter sy Mazda (bus 144) no nifanarakaraka handeha handevina any Antanifotsy. Ilay sprinter no teo aloha nitondra razana narahan’ilay Mazda. Nandeha mafy loatra io Mazda io ka tsy tafiditra ilay fiolanana ka nanitsy tany anaty tatatra tany ankavanan’ny lalana. Mbola nanidina tsy nipaika ilay tanimbary io fiara io vao nidona tamin’ny sisin’ilay tatatra ny lohany ka nifatratra tao. Ny mponina teo amin’ny manodidina sy ny zandary izay niasa teny no nandre io loza io ka namonjy haingana ireo mpandeha. Nosokirina tsirairay ireo mpandeha naratra 19 ny 13 tamin’ireo naratra mafy. Isan’izany ilay mpamily izay tapaka ny tanany sy ny tongony ary naratra koa ny lohany ka tsy mbola mahatsiaro tena. Nalefa any amin’ny HJRA ireo olona 13 ireo raha ao amin’ny CHD Antanifotsy kosa ny sasany.
Roa no namoy ny ainy ka lehilahy 81 taona nipetraka teo aloha, nosokirina farany tao, ary ny iray vehivavy 52 taona izay nipetraka tao afara.
Sprinter nandona kamiao
Sprinter iray no nandona kamiao nijanona teo amoron-dalana teny Ankadindramamy teo amin’ny Samara, omaly maraina. Tsy nisy ny aina nafoy, saingy simba kosa ny fiara vokatry ny fifandonana. Matetika isehoana lozam-piarakodia eo amin’io fidinana eo Ankadindramamy io, ary efa namoizana aina mihitsy tamin’izany. Ny fepetra raisin’ny tompon’andraikitra mifanaraka amin’io lalana io no hisorohana ny loza mety hitranga. Tonga teny an-toerana ny polisy nanao ny fizahana.